श्रीमती अनशनमा, श्रीमानको श’व २१९० दिनदेखि अस्पतालमा ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/श्रीमती अनशनमा, श्रीमानको श’व २१९० दिनदेखि अस्पतालमा !
श्रीमती अनशनमा, श्रीमानको श’व २१९० दिनदेखि अस्पतालमा !
गोरखाको फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन बसिरेकै बेला नि’धन भएको असोज ६ गते ६ वर्ष पुग्दै गर्दा उनकी श्रीमती गंगामाया राजधानी काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरको सातौं तलमा लिक्वीड फूडमा बाँचिरहेकी छन्। उनको प्राण आफूले न्याय पाउने आशामा बचिरहेको छ। आफ्ना कान्छा कृष्णप्रसाद छोरा चितवन मामा घरमा गएको बेला २०६० सालमा तत्कालीन वि’द्रोही माओवादी कार्यकर्ताले ‘ह’त्या’ गरेपछि अधिकारी दम्पत्तिले न्यायका लागि भन्दै चितवनदेखि काठमाडौंसम्म पटक पटक असनस गरे।
पछिल्लो पटक अनसन बसेको ३३४ औं दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको निधन भयो। तर, उनीहरुले न्याय पाएनन्, नन्दप्रसादले अकाल मृ’त्यु वरण गरे र गंगामाया मृ’त्यु कुरिरहेकी छन्। मृ’त्यु भइसकेपछि पनि नन्दप्रसादको श’वले हिन्दु परम्परा अनुसार दा’हसं’स्कारको अवसर पाएको छैन।राजधानीस्थित त्रिभुन शिक्षण अस्पतालमा २ हजार १ सय ९० दिनदेखि उनको श’व राखिएको छ। अझै कति दिन राखिन्छ यकिन छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले श’वको अ’न्त्येष्टि गर्ने विषयमा परिवार कोही नभए बे’वारिसे भए स्थानीय तहको समन्वयमा गर्न सकिने बताए। तर, परिवारका कोही हुँदाहुँदै सरकारले अ’न्त्येष्टि गर्ने अवस्था नरहेको बताए।
अधिकारी दम्पत्तिको न्यायको ल’डाईँमा सहयोग गरेका मानवअधिकारवादी अ’भियन्ता चरण प्रसाईँ राज्य न्याय दिन असफल भएको रुपमा यो मामिलालाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। उनले ग भने, ‘राज्य न्याय दिन असफल भएको छ। क्षमता त पहिला पनि थिएन। अहिले त असफल नै भयो।’उनले न्यायलय, राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनबीच अनौपचारिक गठबन्धन भएकोसमेत आ’रोप लगाए। उनले न्यायलय राजनीतिक दलको क’ब्जामा परेको भन्दै पी’डितलाई न्यायबाट अ’वरोध गर्न राज्य नै लागेको तर्क गरे। उनले अभियोजन गर्दा नै मु’द्दा क’मजोर पार्ने वि’कराल अवस्था आएको बताए।
उनले अधिकारी दम्पत्तिको न्यायको ल’डाईँ अझै जारी रहेको बताए। गंगामायले यसअघि यो मामिला राष्ट्रसंघसम्म पुर्याउने बताएकी थिइन्। उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका प्रतिनिधिहरुसँग पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ।
नन्दप्रसाद अधिकारीको नि’धन हुँदा स्वर्गी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। कोइराला सरकारले त्यतिबेला नन्दप्रसादको अनशन तो’डाउने प्रयास पनि गरेको थियो। तर अन्तिममा सरकारको प्रयास असफल भएपछि अधिकारी दम्पत्तिले अनशन तो’डेनन्। अनशनमै नन्दप्रसादको मृ’त्यु भएपछि सरकारले गंगामायाको खर्च चलाउन भन्दै एक करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरिदियो र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्यो। तर, हालसम्म गंगामायाले त्यहाँबाट एक रुपैयाँ पनि लिएकी छैनन्।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले २० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। तर, राहत कसैले नलिँदा फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘गत वर्ष राहतको निर्णय भएको थियो। कसैले नलिएपछि फिर्ता भयो। अब राहत दिने कुरा छैन।’
कृष्णप्रसाद ह’त्या प्र’कणका मुख्य अभियुक्त रुद्र आचार्य बेलायतमा लु’केर बसेको नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरिसकेको छ। प्रहरीले उनीविद्ध इन्टरपोलमा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरियो। तर सरकारले उनलाई नेपाल ल्याउन पहल नगरेको मानवअिधकारवादी अ’भियन्ता प्रसाईँको बुझाई छ। उनले भने, ‘सरकारले काम गरेजस्तो देखाउने तर त्यसलाई टुंगोमा भने नपुर्याउने गरेको छ। आचार्यलाई नेपाल ल्याउन सरकारले पहल नै गरेको छैन।’अधिकारी दम्पत्तिका छेठा छोरा नूरप्रसा भने डेढवर्षदेखि जे’लमा छन्। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलिरहेको छ। पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय का’रागारमा उनलाई राखिएको छ।डिसी नेपाल बाट
आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्केर १२ लाख रुपैयाँ र ४२ तोला सुन लुटपाट गर्ने २४ वर्षीय राजेन्द्र र उनको साथी समातिए
यस्तो छ बालेन शाहको गाउँ, पुर्खौली घर र सुन्दर परिवार । (हेर्नुस् भिडियो)
अमिताभ बच्चन, परिणिती चोपडाको फिल्ममा नेपाली अभिनेत्री परमिताको इन्ट्री
बुधवार यी १० उपायहरू गर्नुहोस्, इच्छा पूरा हुनेछ !
निकै दुखद खबर : आगलागीबाट ३८ वटा घर जले, पुरै बस्तीमा रुवाबासी..